Imandarmedia.com.np: ठगी मुद्धामा फसेकी रविना थापा अध्यक्षकी दावेदार !
Main News, Prabas, Prabas Khabar » ठगी मुद्धामा फसेकी रविना थापा अध्यक्षकी दावेदार !
ठगी मुद्धामा फसेकी रविना थापा अध्यक्षकी दावेदार !
एनआरएन– एनसिसि अमेरिकाको निर्वाचनले यतिखेर प्रवासी नेपाली बजार तातेको छ ।
संस्थाको नेतृत्वमा आउन धेरैजनाले कसरत गर्न थालेका छन् । अध्यक्ष हुने लालसाले धेरैलाई सताएको छ । आफ्नो धरातल विर्सिएर पदको गरिमालाईसमेत ख्याल गर्न नसक्ने ब्यक्ति पनि अध्यक्षका आकांँक्षी बनेका छन् ।
यस विषयले एनआरएन अमेरिकामा ठूलो हलचल उत्पन्न गरेको विष्लेशण हुन थालेको छ । चुनावी गतिविधि बढ्दै जाँदा यतिखेर धेरैमध्य आफ्नो पदको गरिमासमेत जोगाउन नसकेकी बर्तमान कार्यसमितिकी क्षेत्रिय उपाध्यक्ष रविना थापालाई पनि अध्यक्ष बन्ने लोभ पलाएको छ ।
रविनाको गैरजिम्मेवारीले गर्दा धेरै एनआरएन आजित भइसकेको बुझिन आएको छ । आफ्नो जिम्मेवारी विर्सने तर अरुलाई जिम्मेवारीको पाठ पढाउदै हिड्ने उनको व्यवहारले मेरिल्याण्ड च्याप्टरका सभापति जेदु पोखरेलसमेत पिडित भइसकेका छन् । उनले आफ्नो अनुकुलतामा पोखरेललाई निर्देशन दिने र अनुचित काम गर्न दवाव दिंदै आएकी छन् । पोखरेल यस्ता व्यक्ति हुन जसले मेरिल्याण्डमा डिएमभीका लागि नेपाली भाषामा परिक्षा दिन पाउने व्यवस्था लागु गर्न सफल भएका थिए ।
उनी नेपाली प्रवासीमाझ निकै लोकप्रिय मानिन्छन् । तर रविना कै कारण मेरिल्याण्डमा ठूलो समस्या उत्पन्न भएको छ । जहाँ १२ सय एनआरएनका सदस्य थिए, अहिले रविनाकै कारण सदस्य संख्या घटेर ६ सयमा आइपुगेको बताइएको छ । उनको गतिविधि कस्तो थियो भन्ने कुरा यसवाट पनि प्रष्ट हुने एनआरएनहरु बताउँछन् । अझ जटिल कुरा के छ भने प्रवासी नेपालीको हितमा कामगर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएकी र अध्यक्षको आकाँक्षी बनेकी रविना आफै ठगिको मुद्धामा फसेकी छन् । आफ्नै वरिपरिका साथीभाइलाई ठगी गरेपछि यतिखेर उनि ठगिको मुद्धा खेपिरहेकी छन् ।
यहि सोमवार मुद्धाको फैसला हुने जनाइएको छ । रविनाले रेष्टुरेण्ट संचालन गरिरहेको आसपासको क्षेत्रमा ब्युटिपार्लर संचालनको लागि कोठा भाडामा लिनेक्रममा आफ्नै एक महिला मित्रलाई झुक्याई सम्झौता विपरित १२÷१३ हजार डलर ठगी गरेपछि अदालतमा मुद्धा परेको स्रोतले जानकारी दियो । अदालतको फैसलाबाट उनि जेल जाने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो देखिएको बताइन्छ । उनको नियत नै ठगि गर्ने देखिएकाले अरुपनि ठगिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
२०७४ साउन २२ mआ प्रकाशित ।
Trending : Main News, Prabas, Prabas Khabar